बो ड्रेक, ,२, किन उनी र जोन कार्बेटले कहिले पनि विवाह गर्दैनन् - समाचार
मुख्य समाचार ब्लग शैली सेलेब्स
बो ड्रेक, ,२, किन उनी र जोन कार्बेटले कहिले पनि विवाह गर्दैनन्
बो डेरेक र जोन कार्बेट खुशीयाली करीव १ 18 बर्षदेखि डेटि dating गर्दैछन्, तर त्यहाँ राम्रो अवसर छ उनीहरूले कहिले पनि बाटोमा आफ्नो बाटो भेट्टाउने छैनन।
नयाँ अन्तर्वार्तामा बोले संकेत गरे कि उनीहरूले 'not' का सदस्यता लिइरहेका छन् जब यो गाँठ बाँध्ने काम आउँदछ।
किन जोन र निकोल बिच्छेद भयो
'मलाई थाहा छैन हामी कहिले विवाह गर्छौं,' उनले फक्स न्यूजलाई बताइन्। 'हाम्रो बच्चा छैन। त्यहाँ परम्परालाई पछ्याउन सकिदैन। विवाह, मलाई थाहा छैन। यो हास्यास्पद लाग्छ। यो हाम्रो लागि आवश्यक छैन। हामी हाम्रो प्रेम प्रमाणित गरिरहेका छैनौं, हामी परिवारहरू सँगै आउने नयाँ पुस्ताको शुरूआत गरिरहेका छैनौं। '
त्यो भन्नुको मतलब विगतमा उनीहरूको दिमागलाई पार गरेन भन्ने छैन। वास्तवमा, बो, ,२, उनले र 57 57 वर्षीया जोनले प्रायः गोप्य रूपमा एक पटक विवाह गरे।
'हामी अमेजनमा रमाईलो र भय boat्कर डु boat्गामा थियौं, र मैले सोचें कि तपाईंलाई पछि भन्न मजा लाग्न सक्छ ... कि हामीले अमेजनको फ fun्की सानो डु on्गामा विवाह ग that्यौं, कप्तानले हामीलाई विवाह गरे,' उनले भनिन्। । 'त्यसपछि हामीले निर्णय गर्यौं कि त्यो कुनै अनौंठो थिएन।'
जेसन मेरिट / रडारपिक्स / आरईएक्स / शटरस्टक
उनीहरूको कुञ्जी दीर्घ-स्थायी रोमान्सले सम्बन्धलाई 'दिनदिनै' राख्दैछ, 'उनले भनिन्।
'म बुझ्छु जब उनी स्थानमा जान्छन्, म बुझ्छु जब म यात्रा गर्छु,' उनले भनिन्। 'हामीसँग हाम्रो सबै स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता छ। हामी सँगै समय बिताउन पाउँदा रमाइलो गर्छौं। '
बो, s० को दशक को एक प्रतीकात्मक सेक्स प्रतीक, अझै आश्चर्यजनक छ।
ग्रेगोरी पेस / आरईएक्स / शटरस्टक
बिहीबार रात उनी अमेरीकी हार्ट एसोसिएशनको गो रेड फर महिला NYFW कार्यक्रममा कृतज्ञताका साथ उपस्थित छिन्। एक फारम फिट रातो पोशाक दान गर्दै, बो रनवे धेरै ओहस र आहमा गए।
रीज विदर्सून र निकोल किडम्यान
उनी चहकिलो देखिन्छिन्, रातो पहिरन उनी १ 1979।'S को'१० 'मा लगाएको स्विमसुटबाट धेरै रोइरहेकी थिइन, जुन फिल्मले उनलाई नक्सामा राखी।
ओरियन / वार्नर ब्रदर्स / कोबल / आरईएक्स / शटरस्टक
'' १० 'मेरो लागि सानो हिस्सा थियो,' 62२ वर्षीयले फक्स न्यूजलाई भने। 'मेरो अलि थोरै हिस्सा थियो, र म मेक्सिको जान पाउँदा खुसी भएँ। यो चलचित्रबाट बाहिरको मैले आशा गरें। जब यो खोलियो, मेरो जीवन रातभर परिवर्तन भयो। र अचानक, सबै पत्रिकाको कभरमा हुन र महान वाल्टर क्रोन्काइटले साँझको खबरमा तपाईंको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो, यो ठूलो कुरा थियो। '
उनी तुरुन्तै बसी को पुस्ताको यौन प्रतीक।
'यो मेरो लागि ठूलो समस्या थिएन, किनकि मैले यसलाई कहिले गम्भीरतासाथ लिएको छैन,' उनले भनिन्, 'यो सधैं जागिर हुन्थ्यो, जस्तो कि तपाईंले आफ्नो पोशाक लगाउनुभयो। पछि, यो त्यस्तो समय थियो जहाँ हामीले फिल्म र कामुकता र कामुकतामा सीमानाहरू पार गर्नु पर्ने थियो। कसले पहिले नग्न दृश्य गर्दछ? कसले यो पहिले गर्ने छ? अब, तपाईले पछाडि फर्केर हेर्नुभयो र सबै हावालाई के भयो? '
जस्टिन बीबरको जुँगा र समग्र देखिने मिश्रित समीक्षाहरू
रिडले स्कट मार्क वोल्बर्ग / मिशेल विलियम्स भुक्तानी असफलता को लागी क्रोधित छ
मारियाले नयाँ सगाईको औंठी राख्दछ
megyn केल्ली फर्कने छ जब
जसले ब्लेक वा मिरन्डा ठग्यो
abraxas "a। j।" डायल